Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU oo shir balaadhan ku qabtay xerada dhagaxlay
Ururka OYSU oo shir balaadhan ku qabtay xerada dhagaxlay
Posted by ONA Admin	/ July 20, 2012
Maanta oo ay taariikhdu kubeegnayd 19-07-12 waxaa xerada Dhagaxlay ee deegaanka dhadhaab lagu qabtay shir balaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka OYSU faraciisa dhagaxlay. Shirkan oo ahaa muxaadaro diini ah oo ay qabtaan sanad kasta bishan aan kujiro ee July 21keeda ayaa maanta loosoo hormariyay bisha barakaysan ee Ramadlaan oo bilanaysa.
Kulankan oo aad u balaadhnaa ayaa wuxuu bilowday 8:30pm waxaana lagu furay sidii caadada ahayd aayado quraan ah, ka dibna waxaa la guda galay ajandihii shirka. Ugu horayna xoghayaha OYSU faraciisa Dhagaxlay ayaa warbixin dal iyo dibadba ah siiyay dadwaynihii goobta isugu yimid. Warbixintaa kadib wuxuu xoghayuhu hadalkii siiyay xoghayaha guud ee heer dal oo socdaal howled ku joogay Dhagaxlay oo salaan qiimi badan ka dib soo gaadhsiiyay fariimo uu kawaday guud ahaan faraca Faafan ee Nairobi. Intaa ka dib, wuxuu xoghayuhu kawar bixiyay wacyiga guud ee maanta jira iyo meesha uu halganku marayo wuxuuna dhiiri galin u soo jeediyay dhalinta OYSU oo dhan gaar ahaan kuwa kahowl gala xeryaha Dhadhaab. Wuxuu sidoo kale xoghayuhu bogaadin usoo jeediyay dhalinta OYSU ee xeryaha Dhadhaab oo uu ku sheegay in ay duruuf qalafsan ku shaqeeyaan waliba ay dardar ku wadaan howlahooda.
Kadib waxaa lagu soodhaweeyay culimadii loogu tala galay in ay wacdiga ka soo jeediyaan goobta waxaana ka mid ahaa culumada lagu soo dhaweeyay sh. Aadan oo ugu horaynba ka hadlay jahaadka. Wuxuu sheekhu ku dheeraaday jihaadka iyo fadliiladiisa iyo waliba sida uu fardul-cayn ugu yahay umada ku dhaqan Ogadenia. Wacdiga sheekha oo aad u dheeraa ayuu kusoo qaatay aayado iyo axaadiis jihaadka kahadlaya.
Waxaa kale oo lagu soo dhaweeyay sh Maxamad Cali oo kahadlay soonka iyo salaada wuxuuna sheekhu ku dheeraaday bisha ramadaan ee lasugayo fadliga ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in ay dhalintu kafaa’iidaysato wuxuu sidoo kale sheekhu kahadlay salaada oo uu kusheegay qofka aan tukanin in uusan muslim ahayn wuxuuna sheekhu dhalinta kudhiiri galiyay cabsida allaah wuxuuna sheekhu sooqaatay aayado iyo axaadiis salaada iyo soonka kahadlaya.
Waxaa kale oo lagu soo dhaweeyay sh C/laahi aadan oo isna kahadlay axlaaqda wanaagsan iyo ixsaanka wuxuuna sheekhu ku dhiiri galiyay dhalinta in ay umada ay lanool yihiin kula noolaadaan isxaan falkooduna uu badnaado isagoon sheekhu soo daliishaday aayado iyo axaadiis akhlaaqda iyo isxaanka kahadlaya.
Ugu danbayntii shirkii ayaa soo gaba gaboobay abaara 4:30pm wuxuuna kudhamaaday jawi dagan oo ay iswada salaamayaa dhalintii oo faraxsan.